ပုံတူပွားခြင်း Timeline ကို
1885 သြဂုတ်လ Weismann, Freiberg တက္ကသိုလ်သတ္တဗေဒနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခန္ဓာဗေဒပါမောက္ခ, ဆဲလ်ကွဲပြားခြားနားမှုကတဆင့်သွား၏အဖြစ်ဆဲလ်များ၏မျိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်လျော့မယ်လို့ဆိုခဲ့။
1888 Wilhelm Roux ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အပိုးများကူးစက် plasm သီအိုရီစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ 2-ဆဲလ်ဖားသန္ဓေသား၏တစ်ဦးကဆဲလ်တစ်ပူအပ်နှင့်အတူဖကျြဆီးခံခဲ့ရ; ရလဒ် Weismann ရဲ့သီအိုရီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဝက်သန္ဓေသားခဲ့သညျ။
1984 ခုနှစ်ပညာရှင် Hans Dreisch 2- နှင့် 4-ဆဲလ်ပင်လယ် urchins သန္ဓေသားထံမှ blastomeres အထီးကျန်နှင့်အသေးစားလောင်းသို့သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်ဟာ Weismann-Roux သီအိုရီ၏ချေပချက်အဖြစ်မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။
1901 ပညာရှင် Hans Spemann နှစ်ခုပြည့်စုံလောင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများသို့ 2-ဆဲလ် Newt သန္ဓေသားခွဲ။
1902 Walter Sutton ခရိုမိုဇုန်းအမွေမြေသယ်ခြင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေဆဲလ်ရဲ့နျူကလိယအတွင်းကွဲပြားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို hypothesizing "Brachyotola Magna အတွက်ခရိုမိုဆုန်း Group ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်တွင်" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Sutton လည်းလိင်ဆဲလ်တွေမျိုးရိုးအလိုက်၏ Mendelian ဥပဒေအတွက်အခြေခံခဲ့တာကိုဝေကိုဘယ်လိုခရိုမိုဆုမ်းပြုမူသည်ဟုစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
1902 ဂျာမန် embryologist ပညာရှင် Hans Spemann 2-cell ပုတ်သင်သန္ဓေသားခွဲနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းအစောပိုင်းသန္ဓေသားဆဲလ်တွေလိုအပျသောမျိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်ကြောင်းအထောက်အထားပေး, လူကြီးမှကြီးပွားသတည်း။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့ဆဲလ်အတွင်းရှိဗီဇအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူလျော့ကျကြောင်း Weismann ရဲ့ 1885 သီအိုရီ disproved ။
1914 ခုနှစျပညာရှင် Hans Spermann ကောက်ယူစောစောနျူကလီးယားလွှဲပြောင်းစမ်းသပ်ချက်။
1928 ပညာရှင် Hans Spemann နောက်ထပ်အောင်မြင်သောနျူကလီးယားလွှဲပြောင်းစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
1938 ပညာရှင် Hans Spemann စာအုပ်အတွက်ပုတ်သင်သန္ဓေသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သည်သူ၏ 1928 စရိုက်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်းစမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် "သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် induction ။ " Spemann သုတေသနအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ဖြစ်သင့်ဟုစောဒက ပုံတူပွားခြင်း တစ်ဦးထူးခြားဆဲလ်၏နျူကလီးယပ်စလုပ်ပြီး Extract နှင့်တစ်ဦး enucleated ကြက်ဥထဲသို့ချပြီးအားဖြင့်သက်ရှိ။
1944 Oswald Avery တစ်ဦးကလာပ်စည်းရဲ့မျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များ DNA တွင်သယ်ဆောင်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ
နွားများ၏နောက်ပိုင်းတွင်သုက်အဘို့ကို C ° -79 မှာနွားလားသုတ်ရည်၏ 1950 ခုနှစ်ပထမအအောင်မြင်သောခဲပွီးမွောကျခဲ့သညျ။
1952 ပထမဦးဆုံးတိရိစ္ဆာန်ကိုယ်ပွား: ရောဘတ် Briggs နှင့်သောမတ်စ်ဂျေဘုရင်ကမြောက်ပိုင်းကျားသစ်ဘားပုံတူမျိုးပွား။
1953 Francis က Crick နဲ့ James Watson, ကိန်းဘရစ်ရဲ့ Cavendish ကဓါတ်ခွဲခန်းမှာအလုပ်လုပ်, DNA ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
1962 ခုနှစ်ဇီဝဗေဒဆရာယောဟနျ Gurdon သူအပြည့်အဝထူးခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအူလမ်းကြောင်းဆဲလ်၏နျူကလီးယပ်စသုံးပြီးတောင်အာဖရိကဘားပုံတူမျိုးပွားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာဆဲလ်အထူးပြုဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်ဆဲလ် '' မျိုးရိုးဗီဇအလားအလာနုတ်မသရုပ်ပြခဲ့သည်။
1962-65 ရောဘတ် G. အ McKinnell, သောမတ်စ်ဂျေဘုရင်နှင့်မာရီအေ Di Berardino အရွယ်ရောက်ဖားကျောက်ကပ်ကင်ဆာဆဲလ်အရေးပါနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ enucleated oocytes ထံမှလောင်းရေကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
1963 ခုနှစ်ဇီဝဗေဒ JBS Haldane ဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာအသုံးအနှုန်း "ကိုယ်ပွား" စတင်သုံးစွဲ "ဟုအဆိုပါ Next ကိုဆယ်ပါး-တစ်ထောင်နှစ်များ၏လူ့မျိုးစိတ်အဘို့အဇီဝဗေဒဖြစ်နိုင်သော။ "
1964 FC အသင်းဘဏ္ဍာစိုးတစ်ဦးအပြည့်အဝထူးခြားမုန္လာဥနီအမြစ်ဆဲလ်ကနေပြီးပြည့်စုံသောမုန်လာဥနီစက်ရုံကြီးပွားသတည်း။
1966 ခုနှစ်မာရှယ် Niremberg, Heinrich Mathaei နှင့် Severo Ochoa ပာ codon နှစ်ဆယ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များတစ်ဦးချင်းစီသတ်မှတ်ထားသောအဘယ်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ, မျိုးဗီဇကုဒ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
1966 ခုနှစ်ယောဟနျသခ Gurdon နှင့် V. Uehlinger enucleated oocytes သို့ tadpole အူလမ်းကြောင်းဆဲလ်အရေးပါထိုးသွင်းပြီးနောက်အရွယ်ရောက်ဖားကြီးပွားသတည်း။
1967 DNA ကို ligase အတူတကွ DNA ကို၏ strands binding များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်း, အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1969 ဂျိမ်းစ် Shapiero နှင့်ဂျြော Beckwith သူတို့ကပထမဦးဆုံးအမျိုးဗီဇအထီးကျန်ကြေညာခဲ့သည်။
1970 Howard Temin နှင့်ဒါဝိဒ် Baltimore တစ်ခုချင်းစီကိုလွတ်လပ်စွာပထမဦးဆုံးကန့်သတ်အင်ဇိုင်းအထီးကျန်။
1972 မှာပေါလု Berg ကအရှင်ပထမဦးဆုံး recombinant DNA ကိုမော်လီကျူးများအတွက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသက်ရှိများ၏ DNA ကိုပေါင်းစပ်။
1973 Stanley Cohen ကိုနှင့်ဟားဘတ် Boyer ရှင်ပေါလု Berg ကအားဖြင့်ရှေ့ဆောင် recombinant DNA ကိုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ပထမဦးဆုံး recombinant DNA ကိုသက်ရှိကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာ၏အခြေခံ - ဒါ့အပြင်မျိုးရိုးဗီဇ splicing သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးသက်ရှိများ၏ DNA ကို manipulate ခွင့်ပြုသောဤ technique ကိုအဖြစ်လူသိများ။
1977 ကားလ် Illmensee နှင့်ပေတရု Hoppe တစ်ခုသာကြင်ဖော်မဲ့မိဘနဲ့အတူကြွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။
တစ်ဦးက Man ၏ကိုယ်ပွား: 1978 ညျဒါဝိဒျ Rorvik သူ့ပုံရိပ်ခုနှစ်တွင်ဝတ္ထုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
1978 ကလေး Louise အတွက်စသည်တို့ fertilization မှတဆင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်။
1979 ခုနှစ်ကားလ် Illmensee သုံးကြွက်ပုံတူမျိုးပွားပြီပြောဆိုထားသည်။
1980 ခုနှစ်ကိစ္စတွင်စိန် v ။ Chakrabarty ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်a"ကိုတိုက်ရိုက်, လူ့ဖန်ဆင်းဇီဝမူပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ " အဲဒီအုပ်ချုပ်
1983 Kary ခ Mullis ဒီဖြစ်စဉ်ကို DNA ကို၏ designated အပိုင်းအစများ၏လျင်မြန်စွာပေါင်းစပ်ဘို့ခွင့်ပြု 1983 အတွက် polymerase ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု (PCR) တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
1983 Davor Solter နှင့်ဒါဝိဒ် McGrath နျူကလီးယားလွှဲပြောင်းနည်းလမ်းကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ကြွက် clone ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖား erythrocytes ၏ 1983-86 မာရီအေ Di Berardino, နန်စီအိပ်ချ် Orr နှင့်ရောဘတ် McKinnell အစားထိုးအရေးပါ, အရှင် Pre-နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစာကျွေး tadpoles ရရှိခဲ့သည်။
1984 Steen Willadsen, သန္ဓေသားဆဲလ်တွေကနေနျူကလီးယားလွှဲပြောင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးပြီးပုံတူပွားခြင်းနို့တိုက်သတ္တဝါ၏ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးအတည်ပြုဥပမာသိုးပုံတူမျိုးပွား။
1985 Steen Willadsen ဆုတိရစ္ဆာန်များသန္ဓေသားပွားရန်သူ၏ကိုယ်ပွား technique ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ကြောင်းဝက်: 1985 Ralph Brinster ပထမဦးဆုံး Transgene မွေးမြူရေးဖန်တီးခဲ့တယ်။
1986 ခုနှစ်ထူးခြား, One-ရက်သတ္တပတ်ဟောင်းသန္ဓေသားဆဲလ်တွေသုံးပြီး Steen Willadsen တစ်ဦးနွားမပုံတူမျိုးပွား။
1986 Artificial inseminated အငှားမိကားမာရိဗက် Whitehead သူမသည်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ချုပ်နှောင်ထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပျက်ကွက်ကလေးအမ်ဘွားမြင်လေ၏။
1986 Neal ပထမဦးစွာ Randall Prather နှင့်ဝီ Eyestone တစ်ဦးနွားမ clone စောစောသန္ဓေသားဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ 1990 ကနျြးမာရေး၏အမျိုးသား Institutes တရားဝင်ဖြန့်ချိ လူ့ဂြီနိုစီမံကိန်း အတွက် 50000 100000 မှမျိုးဗီဇများနှင့် sequence ကိုခန့်မှန်းခြေ3ဘီလီယံနေရာချထားရန် ဘေ့ လူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ၏။
1993 ခုနှစ်အမ် Sims နှင့် NL ပထမဦးစွာယဉ်သန္ဓေသားဆဲလ်တွေကနေအရေးပါ၏အပြောင်းအရွှေ့အားဖြင့်နွားသငယ်၏ဖန်တီးမှုမှဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇူလိုင် 1995 မှ Ian Wilmut နဲ့ Keith ကမ့်ဘဲလ် Megan နှင့် Morag အမည်ရှိနှစ်ခုသိုး, clone မှထူးခြားသန္ဓေသားဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 5, 1996 ဒျေါလီ, အစဉ်အဆက်အရွယ်ရောက်ဆဲလ်ထံမှပုံတူမျိုးပွားခံရဖို့ပထမဦးဆုံးသက်ရှိ, မွေးဖွားခဲ့သည်။
စကော့တလန်အတွက် Roslin Institute ကဖေဖော်ဝါရီလ 23, 1997 သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတရားဝင် "ဒျေါလီ" ၏မွေးဖွားထုတ်ပြန်ကြေညာ
မတ်လ 4, 1997 နိုင်ငံတော်သမ္မတကလင်တန်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးထောက်ပံ့လူ့ကိုယ်ပွားသုတေသနအပေါ်တစ်ဦးငါးနှစ်ကြာမျှဆိုင်းငံ့ထားအဆိုပြုထား။
ဇူလိုင် 1997 မှ Ian Wilmut နဲ့ Keith ကမ့်ဘဲလ်, ဒျေါလီနေသူများကဖန်တီးခဲ့သူသိပ္ပံပညာရှင်များလည်း Polly, အရေပြားတစ် Lab ထဲမှာစိုက်ပျိုးဆဲလ်များနှင့်တစ်ဦးလူ့ဗီဇဆံ့ဖို့ဗီဇပြောင်းလဲထံမှပုံတူမျိုးပွားတဲ့စစ်တမ်း Dorset သိုးသငယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။
သြဂုတ် 1997 နိုင်ငံတော်သမ္မတကလင်တန်မှာအနည်းဆုံး5နှစ်များအတွက်လူသား၏ကိုယ်ပွားပိတ်ပင်ရန်ဥပဒေပြဌာန်းအဆိုပြုထား။
ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့ဆေးသမား၏စက်တင်ဘာ 1997 ထောင်နှင့်ချီသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လူ့ကိုယ်ပွားအပေါ်တစ်ဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်ငါးနှစ်ကြာမျှဆိုင်းငံ့ထားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ 5, 1997 ရစ်ချတ်အမြိုးအနှယျသူဖက်ဒရယ်ဥပဒေများထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စဉ်ကိုတားမြစ်နိုင်ကြောင်းမတိုင်မီလူသားတစ်ဦး clone ရည်ရွယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
အစောပိုင်းဇန်နဝါရီ 1998 တစ်ဆယ့်ကိုးဥရောပလူအမျိုးမျိုးလူ့ကိုယ်ပွားအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 20, 1998 အဆိုပါအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကလူ့ကိုယ်ပွားအုပ်စိုးခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
ဇူလိုင် 1998 Ryuzo Yanagimachi, Toni ပယ်ရီနှင့် Teruhiko Wakayama သူတို့အောက်တိုဘာလ, 1997 ခုနှစ်ကတည်းကလူကြီးဆဲလ်ကနေ 50 ကြွက်ပုံတူမျိုးပွားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ 1998 Botechnology ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Perkins-အဲလ်ကော်ပိုရေးရှင်းကမျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ်ကျွမ်းကျင်သူဂျေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်
Craig Venture ပုဂ္ဂလိကပိုင်လူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ map ရန်။
အဆိုပါ Matrix နှင့်ဘာသာတရား: ဒါဟာခရစ်ယာန်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ပွဲတော်လား?
မေတ္တာရှင် v ။ ဗာဂျီးနီးယား (1967)
Southern Baptist နှင့်အမျိုးသမီး၏အခန်းက္ပ
1909 မှ 1900: အာဖရိက-အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို
မစ်ဆူရီကျောင်းသားများ, K သည်-12 အခမဲ့အွန်လိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းများများစာရင်း
ကောငျးကငျတ Raphael, ကုသမှု၏အိန်ဂျယ်တွေ့ဆုံရန်
1939 မှ 1930: အာဖရိက-အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို
ပါဝါသတ်မှတ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုအတော်များများ Element တွေကိုရှိပါသလား
ကုသမှု Tattoo ဓါတ်ပုံများ၏စုစည်းမှု
ဘရောင်း Marmorated နံဘာဂ် (Halyomorpha halys)
ထိပ်တန်း 20 Rihanna သီချင်းများ
အဆိုပါ "ထူးအိမ်သင်က Man" ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်စာရင်း
Yips: ဒီနေရာမှာသူတို့ကမှန်ကဘာလဲ, နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ Want မနေပါနဲ့
Delphi SET အမျိုးအစားကိုနားလည်ခြင်း
Sara Teasdale ကိုသင်စကားနှင့် "ကြယ်" ဖော်ပြပေး
Pastel ပန်းချီကားတစ် Fixative အဖြစ် Hairspray
အဆိုပါအသက် 15 အခြေခံပညာအသားစားမိသားစုများ
အဆိုပါ DBNavigator Customize လုပ်နည်း